Amathuba oKhathalelo lwamaNdiya e-UAE kunye neVisa ebonelelwe
Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
Faka isicelo somsebenzi eDubai-Strategies kunye noPhando kwiKhondo lomsebenzi kwi-UAE
Fumana imisebenzi yeBhanki eDubai
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 23, 2017
Amathuba amaMerika ase-UAE
Kukhuselekile ukuya kwi-UAE
Career Amathuba amaIndiya kwi UAE, Ngokwenyani, yinto enkulu ukuba Indian expats. Uqoqosho lwe-UAE lukhula ngokukhawuleza kungokunje amathuba emisebenzi. Ukuba useIndiya kwaye ufuna ingqesho, ilizwe leArabhu lelona khetho likhulu. Kulula ukufumana umsebenzi eIndiya kunokuba unokucinga. Uninzi lwabantu luneentloni zokwenza isicelo kumazwe aphesheya ngenxa yenkqubo kunye nokoyika ukungaziwa.
Kutshanje, umIndiya urhulumente uza nezicwangciso ezitsha ingekuko ukuqhubekeka kodwa ukunceda ukugcina ukhuseleko lwabemi bayo ngelixa besebenza kumazwe aphesheya. Enye yezona ndawo zihamba phambili zabasebenzi kwi-UAE. Idume kwihlabathi jikelele njengomhlaba wamathuba oqeqesho kuwo onke amasimi.
Ukususela ekuqaleni konyaka, amaIndiya kufuneka abhalise kwiqonga le-Intanethi eliqhutywa ngurhulumente ngaphambili bemka baye e-UAE emsebenzini. Oku kusebenza kubanini beepasipoti ezingezizo ze-ECR ezihamba ngesiseko sengqesho. Bambalwa kakhulu amaIndiya aya e-UAE ngokutyelela okanye ekhefini, elona visa lilula kukwenza umsebenzi. Urhulumente ufuna nawuphi na ummi waseIndiya onomdla wokufudukela kwi-UAE ukuze agqibe inkqubo yokubhalisa ubuncinci kwiiyure ze-24 ngaphambi kwexesha lokuhamba. Eyona njongo kukukhusela intlalontle kunye nezinto onomdla kuzo Abemi baseIndiya ngelixa besebenza phesheya.
Ukufumana umsebenzi kwi-UAE
I-UAE yintengiso yamathuba yomqeshi olinganayo. Awunakhathazeka malunga nobuzwe bakho. Inyaniso, kwingingqi yama-Arabhu Unobuhlobo obusondeleyo nelizwekazi laseIndiya kungoko kulula ukuhambisa amaxwebhu ukuba uyakufanelekela umsebenzi. Njengabemi kwihlabathi liphela, kuya kufuneka wenze uphando oluninzi ngamathuba akhoyo kwaye wenze izicelo ezifanelekileyo ezihambelana nomdla wakho.
Kulula eIndiya kunakwamanye amazwe omhlaba ngenxa ye inyathelo likarhulumente ukunceda abemi abanolwazi nabangenazakhono zokufumana umsebenzi ngaphakathi nangaphandle kwelizwekazi. Inani labemi baseIndiya liphakathi kwelona likhulu emhlabeni. Ngabantu abadala ukwenza inxenye yomsebenzi omkhulu, bambalwa kakhulu aba banemisebenzi ezinzileyo kungoko ingeniso yokungathembeki.
Ndiqinisekile ukuba uyayiqonda imeko yezoqoqosho e-India ngokubhekisele kumanqanaba engeniso yekhaya. Ayisiyomfihlo okanye ihlazo kurhulumente; urhulumente waseIndiya uphume ngesibindi ukunceda abemi bayo ukuba bafumane umsebenzi phesheya kwiindawo eziphambili njengeAEE. Ewe kunjalo, oku kuyongeza amandla i-GDP yelizwe labo lokuzalwa. Sisicwangciso esenziwe ngurhulumente kazwelonke esenza ukuba kube lula ukuba amaIndiya afumane umsebenzi e-UAE.
Kulula ukucwangcisa i-visa yabafundi ukusuka eIndiya ukuya e-UAE. Iindleko ezinxulumene nokuhamba kwabafundi nazo ziphantsi. It ikuqinisekisa indawo kwi-UAE. Injongo, kule meko, kukuseta unyawo kwilizwe. Unokufundela iminyaka ye-4 okanye iinyanga ezimbalwa njengawe fumana umsebenzi. Ngomgangatho ophezulu wengqesho kwi-UAE, awunakuphulukana nomsebenzi; Nokuba uyinto eqhelekileyo okanye yingcali kuxhomekeka kwimfundo yakho
Inkxaso mali yokufunda kukunceda ufumane ilizwe. Uninzi lwabaqeshi kwi-UAE luya kukunceda uqhubekeke nemvume yokusebenza yethutyana. Ukuba uyakwazi ukulawula ingqesho ixesha elide, imvume iya kwandiswa kwaye iphele ibe esisigxina. Ukufumana ilungelo lokuba ngummi kwi-UAE yimpumelelo enkulu, kodwa kufuneka unyamezele kwaye uhambelane nemisebenzi yakho. Kuya kufuneka uthembane nabomthonyama; ukuthembela kubalulekile kwinkcubeko yama-Arabhu.
Inkcubeko yamaIndiya neyama-Arabhu banezinto ezifanayo nokudibana ngokulula phakathi konxinzelelo zibumba zombini iinkcubeko. Kuya kufuneka uthathe ithuba ubudlelwane obumiselwe kwinkolo ukufumana naluphi na uhlobo lomsebenzi. Kufuneke u yiba nengqondo evulekileyo xa ufuna umsebenzi e-UAE. Uninzi lwabaqeshi bafuna ukuqaphela, ukuvavanya, kunye nokuseka ukuthembana kunye nokuzithemba kunye nomsebenzi ngaphambi kokuba babele iindima ezithile kunye nokwabelana ngeendlela eziphambili zenkampani. Oku kusebenza kuwo onke amabakala a ishishini.
Vula ngeenjongo zakho, kwaye unokufumana lula ukuthunyelwa kumhlobo okanye isihlobo seqabane elibuyayo eIndiya. Ukufudukela kwi-UAE kwi-visa yomsebenzi akunzima, kodwa kuqala, kuya kufuneka usebenze ukuze ufumane umsebenzi ofanelekileyo. Imigangatho yokuphila kwilizwe lama-Arabhu ixhomekeke kwisixeko oya kukhetha ukuhlala kuso.
Nangona kunjalo, kufuneka uqale ugxile ekufumaneni umsebenzi, kwaye abanye baya kulandela.
I-UAE ngumqeshi oyintloko; nabani na ongavuma thatha ithuba lokuya eDubai nokuba kuphela impelaveki. Ummandla wama-Arabhu ukhula ngokukhawuleza okuthetha ithuba elingakumbi leshishini kunye nengqesho. Ukuba unazo naziphi na izakhono, unokufumana amathuba amahle emisebenzi ngaphakathi dubai. Inqanaba lomvuzo eDubai nalo liyabukeka; Ngaphandle koko, izindlu kunye nezinto ezihlawulwayo azikho phezulu njengamanye amazwe aphambili kwihlabathi liphela. Ukudityaniswa kobuninzi beoyile kunye Inkcubeko yama-Arabhu iyenza yeyona ndawo ifanelekileyo ukuba ibe yeyamaNdiya ngenxa yokuqonda phakathi kwezi nkcubeko zimbini.
Ndingawufumana umsebenzi? - Amathuba oKhathalelo lwamaNdiya e-UAE?
IDubai inabasebenzi abancinci abanobuchule kwaye isoloko ikhangela abantu abanobuchule bokuzalisa lo msebenzi. Abahlali batyebile ngenxa yeoyile kwaye abanangxaki yokuhlawula abasebenzi lo gama ishishini liqhuba ngokwendlela abalindele ngayo. Umcimbi kuphela ekufumaneni umsebenzi ngaphakathi IDubai kukuhlanganiswa kwenkcubeko. Abemi baseArabhu bangqongqo kwiinkolelo zabo kwaye banokukhathazeka kalula ukuba wenza ngenye indlela; Ngelixa ungangabelani okanye ungavumi iinkolelo zabo, balindele ukuba wenze ngokungqinelana neenkolelo. Kulungile ukuba uthathe ilizwe labo ubuncinci, ungabaqeshi.
Ngelixa lucelomngeni kubantu abaninzi abafuna imisebenzi eDubaiAmaIndiya abekwe bhetele ngenxa yomxube wenkcubeko. Uhlobo lwazo zonke ezi nkolo zenza kube lula ukuhlala kunye. Awuyi kuba nangxaki njengomIndiya ukuze uhambisane nama-Arabhu. Indiya nayo ingqongqo kumaxabiso ayo, ibalulekile kuma-Arabhu. Banengqondo yokuziphatha njengamaIndiya.
Isizathu esivakalayo sokuba le mimandla mibini idibene. Ukuqonda izinto zentlalo kunye nezenkolo kubenza babe ngabahlobo abahlala behleli. Ukuba ubeliqela labantu ekwenziwe udliwano-ndlebe nabo abaneziqinisekiso ezifanayo kwizinga lezakhono, Uya kuba nesibonelelo ngaphezulu kokunye ngenxa yemvelaphi yakhon. Ngelixa oku kungagxekwa kwimida eyahlukeneyo, abaqeshi baseDubai banokhetho kunye nelungelo kuyo.
Ngoko ewe, unokufumana lula umsebenzi e Dubai xa uvela eNdiya.
Ndiyifumana njani umsebenzi?
Amathuba awapheli, i-odds isesandleni sakho, kodwa unomsebenzi omnye, Ukufumana umsebenzi ofanelekileyo. Njengoko kukhankanyiwe, i-Dubai inamathuba amaninzi engqesho kodwa ayinguwo wonke umsebenzi olingana nezakhono zakho, amava akho, okanye ukhetho lwakho. Kwakhona, kuya kufuneka wazi iziteshi ezentengiso imisebenzi eDubai.
Ukuba ucacisa malunga neziqinisekiso zakho kwaye ufuna umsebenzi othile, unokufuna ukwenza uphando kumashishini aphambili eDubai nokuba ayabaqasha. Unokuba nesibindi kwaye uthumele i-imeyile ebandayo ukubhengeza izakhono zakho. Oku kunokutolikwa njengokuphelelwa lithemba okanye ukuzithemba. Nokuba yeyiphi na oyisebenzisayo, akunakulindeleka ukuba uphulukane nethuba lokufumana ingqesho xa usenza ngqo abafowunelwa. Ukuchaza izinto onomdla kuzo kunye Injongo yomsebenzi yindlela elula yokufumana umsebenzi eDubai ngelixa i-Expo 2020 isiza.
IDubai iphakathi kwezixeko eziphezulu ezinonxibelelwano oluzinzileyo lwe-Intanethi. Inqanaba lobuchwepheshe eDubai kunye ne-UAE iyakhula ngokukhawuleza. Uninzi lweenkampani zisebenzisa amaqonga edijithali ukuqesha okanye ukubandakanya abathengi. Ukujolisa kuwe ukukhangela umsebenzi kwiqonga le-intanethi kunokukukhokelela ngokulula kwisiseko seDubai. Ukuthakazelela kubuchwephesha bedijithali kukwenza kube lula ukukholisa umqeshi. Ukunxibelelana nomqeshi onokubakho eDubai nge-imeyile okanye ngeendlela kwiwebhusayithi yabo okanye imithombo yeendaba kwezentlalo iphembelela isigqibo sabo somsebenzi. Ama-Arabhu apha anomdla kubuchwepheshe kwaye ukubonisa amandla akho kuya kubenza bathathe izigqibo.
Izinzuzo zokusebenza eDaibha
NjengomIndiya, eli iya kuba lithuba elitshintsha ubomi ngoba yenqanaba eliphezulu lezoqoqosho eDubai. Umgangatho wobomi nawo uphezulu ngokuthelekiswa neIndiya, kodwa iindleko zihlala ziphantsi. Amaxabiso erhafu anobuhlobo; amatyala okusebenzisa asemgangathweni; Izinto ze-elektroniki kunye neendleko zovuyo nazo zilawulwa. Izinga lokufumana umvuzo eDubai likwanomdla xa uthelekiswa neendawo ezininzi zehlabathi.
Khumbula, unethuba elihle ukuba use-India. Urhulumente waseIndiya ukwayixhasa ngokukhawuleza Ukulungiswa kwee-visa zomsebenzi eDubai.
Imisebenzi eDaibhi kumaNdiya e-UAE - "Isikhokelo esinolwazi kakhulu". Ngoku abantu abafuna umsebenzi abavela eIndiya banokufaka kwakhona inkampani yethu kwakhona. Indawo yethu yomsebenzi portal ibizwa Dubai City inkampani ngoku uqesha kwi-UAE. Ngale nto engqondweni, iqela lethu lincedisana nabaphambukeli baseIndiya ukuba bafumane umsebenzi kwingingqi yeGulf. Njengomntu ofuna umsebenzi omtsha ovela eIndiya. Ungasebenzisa inkonzo yethu ukufumana a msebenzi wephupha kwi-UAE. Ngokukodwa eDubai, Abu Dhabi naseSharjah Cities. Ngokubanzi, iqela lethu lokuqesha likwazi ukulawula imisebenzi eDubai yamaIndiya. Kwaye iinkonzo zethu ze-HR zinikezelwa ikakhulu kubafuna umsebenzi waseIndiya. Yiba ngumphathi ngenkampani yethu ngoku kulula kakhulu. Iinkonzo zethu simahla kubaqeqeshi abatsha. Unga Faka kwakhona ngezantsi kwaye fumana iphupha lomsebenzi kwi-UAE. Ngokuqhelekileyo, amaNdiya anethuba elikhulu kwi-Dubai City.
Xa ndifaka isicelo nenkampani yakho ndingaba nayo Isiqinisekiso sokuba imisebenzi inikezela?. Impendulo yethu nguEwe, ukuba nje usithumela isicelo. Omnye wabameli bethu uya kubuyela kuwe ngolwazi kunye neenkcukacha. Ezinye iimeko kufuneka sithethe nawe ngaphaya kweSkype okanye WhatsApp. Kodwa emva kwesicelo, ungalindela umsebenzi eDubai njengomntu waseIndiya.
Ngaba unako ukubonelela imisebenzi e Dubai ukusuka eIndiya?
Ewe, inkampani yethu inceda abo bafuna umsebenzi waseIndiya ukuba bafumane umsebenzi Emirates. Omnye wabaphathi bethu be-HR uhlala enceda ukufumana umsebenzi ngaphakathi Dubai for Indian Ukudlula kwe12th kunye nomsebenzi waseDubai wabasebenzi be-Indian 10th pass. Ke, ngokuthe gabalala, kukho ukubakho okukhulu kunye neNkampani yeDubai City yokufumana umsebenzi kwi-UAE. Injongo yethu kukunceda abasebenzi abavela eIndiya babe ngomnye wabasebenzi abasebenza ngaphandle e-Abu Dhabi okanye eDubai.
Elinye icala elingelolakho iqela lethu lihlala lijamelene nenkqubo enzima kwinkqubo yokwenza isicelo. Oku kufuneka kwenziwe kwicala lakho, kwaye kufuneka ube u-100% uqinisekile ukuba isicelo sakho somsebenzi siyenziwa ngokujolisa kakhulu kwiinkcukacha eDubai. Iqela lethu lihlala lizama ukusityhala kancinci isicelo sakho indawo uyakhula kwaye ngokuqinisekileyo ungowona mvuzo ungcono.
Kukho rhoqo inqanaba lemisebenzi enikezelayo esinokuyenza:
Umgangatho wokungena ( Abafundi abasandul 'ukuphumelela ) Ingaphantsi kwe- $ 3,000 ukuya kuthi ga kwi- $ 4,5000 ngenyanga.
Ulawulo oluphakathi (i-3 ukuya kwi-10 iminyaka yamava) Akukho ngaphantsi kwe-$ 5,000 ngenyanga, ezinye iimeko ukuya kwi-8,000-$ 11,000 ngenyanga ngaphandle kwebhonasi.
Abaphathi abaPhezulu kufuneka babe ngaphezulu kwe-8 iminyaka yamava oshishino kwishishini laseDubai, iinjineli okanye ulawulo lwamaqela athile. Iholo ngeli nqanaba lingaphezulu kwe- $ 10,000 ukuya kuthi ga kwi- $ 25,000 ngenyanga.
Abaphathi abafundileyo, Abalawuli, i-CFO, i-CEO banokulindela okungaphezulu kune- $ 25,000 ngenyanga. Kodwa kule misebenzi inikezelwayo nceda usazise ngasese.
Nangona kunjalo, ukuba ujonge ngaphezulu koku, kwaye umvuzo uyindlela yokuthoba kuwe. Nceda wenze isicelo kunye nenkampani yethu kuba iDubai inezinto zonke. Ke umphathi wethu we-HR uya kujonga kwiifayile zakho kwaye akuncede ukonyuse ibha ngemivuzo.
Ngaba ndifuna ukuba ne-visa yokufumana umsebenzi kwi-UAE?
Hayi, enye yezona zinto ziphambili kunye nenkampani yethu kukukhawuleza kunye nokuhambisa iinkonzo ngokulula. Ke, ngokuthetha nje, kunye nenkampani yethu unokuba neleta yomsebenzi ngelixa uhleli eIndiya. Uninzi lwemisebenzi yaseDubai yamaIndiya iyalawuleka kwi-intanethi. Ke, impendulo yakho ngu, Inkampani yethu inokukunceda ufumane umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Enye yezona mpazamo zinkulu iqela lethu labasebenzi leHR ezinokubona yonke imihla kukuswela amava. Umzekelo, abantu baseIndiya abafuna umsebenzi tyelela i visa kwi-UAE. Kwaye ngaphantsi kweepesenti ezimbini ithuba lokuba lo msebenzi uphande uphumelele.
Ngoko ke, ungawufumana njani umsebenzi eDubai njengaseIndiya kwiziko lonxibelelwano emva koko? Ewe, ukuphela kwendlela yengqesho e-Emirates kukuba zonke izinto zilungelelaniswe. Isicelo sokuqala semisebenzi, emva koko abaqeshi kufuneka bakhuphe i-visa kwaye emva koko babhabhe bekhutshiwe banokubhukishwa kwaye ukuza ku-Emirates ngendlela esemthethweni.
Ngenisa i-CV kwiNkampani yaseDubai City
Chofoza Ngezantsi kwe100% Guarantee!
Nceda uhlanganyele ekuncedeni abanye bafumane umsebenzi e-Dubai
Imisebenzi e-Dubai - I-Middle East yokufuduswa kwenkxaso ye-Expats
Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE, Ngokwenyani, yinto enkulu. Nangona kunjalo, ukufudukela kwi-United Arab Emirates yinto enkulu kodwa kwangaxeshanye lukhetho oluhle. IsiXeko saseDubai sesisesona ndawo sakha sasebenza eIndiya. Ngemimiselo yokuba uphando lomsebenzi kubagqatswa ukusuka eIndiya ukuya e-Dubai yona khetho. Kodwa ngexesha elifanayo xa wenza isigqibo sokuya e-Dubai okanye e-Abu Dhabi. Yonke inkonzo kufuneka ihlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuba thumela iCV yakho.
Emva kokuqwalaselwa ngenyameko yomsebenzi wezaziso ze-UAE zikaRhulumente, nceda ukhangele kwiwebhsayithi ye-scam yomcebisi. Ngakolunye uhlangothi, kufuneka uyenze umgangatho wendawo yeli thuba ayikho isibhengezo esiyinyumba. Ukongezelela, unako ukufumana i-career-offer on offer. Yonke into esuka eIndiya ingafakwa kwimisebenzi yase Dubai. Kungakhathaliseki ukuba uvile ntoni, ukuba wena yenza ukuthengisa kwakho ngomsebenzi e Dubai. Ngokuqinisekileyo uya kwandisa ithuba lokufumana ileta yengqesho.
Enye ingongoma ephambili omele uyiqonde ngamathuba emisebenzi kumaNdiya e-UAE. Ngaba le minyaka elandelayo kwilizwe laseGulf ngokuqinisekileyo izisa umsebenzi omtsha ebhodini? Umzekelo, Expo 2020 career kwaye INdebe yeHlabathi yeFifa eKatar Kwakhona nethuba elikhulayo kwiGCC. Ngoko phantse yonke i-expat iya kuba nelithuba ukufumana umsebenzi kwiizwe laseGulf.
Njani Imisebenzi e Dubai nge-Indian ingenziwa?
Enye yamanqaku amahle iNkampani yeDubai City ebabonelela abaviwa babo kukuphendula ngokukhawuleza. Iqela lethu lokugaya, ngokuthetha nje ngokubanzi, linokubonelelwa ngemisebenzi ngaphakathi kweveki. Kodwa elona xesha lide sililawulayo lalijikeleze iinyanga ze6. Iyonke kuxhomekeke kumava omviwa. Ngapha koko, umbutho wethu uhlala ufuna ukuqiniseka ukuba zonke iinkalo kunye neemfuno ziya kubonelelwa njengesicelo somthengi.
Siyabancedisa abantu fumana umsebenzi eDaibha. Ngokwenyani, siyanceda nge visa kwaye ukufumana imisebenzi yokunikezela ngaphakathi e-Dubai iingcebiso. Inkampani yethu inikeza iinkonzo zokukhangela umsebenzi kwi-Emirates. Ngoko, abaviwa baseIndiya ngokuqinisekileyo baya kuDaibra. Silapha ukuze senze uphando olunzulu lwezobugcisa e Dubai, u-UAE ulwazi lweemarike zomsebenzi. Isiseko malunga nokuzama ukubeka abaviwa.
Le ngcaciso iya kukuxhasa ukunyakaza komsebenzi ngaphakathi kwe-UAE. Inkampani yethu iyathandwa kakhulu esekelwe kuphela kwiinkonzo esizibonelela ngemisebenzi emangalisayo kwimisebenzi yase-Dubai yamaNdiya.
Ngale ngqondweni, yethu Indlela ye-WhatsApp yokuqashwa kwefowuni wanceda indawo yamazwe ngamazwe umcebisi womsebenzi ngokukodwa evela eNdiya. Ukubeka ngenye indlela abaphathi abaqeshwe baseIndiya kwiindawo zase-Dubai. Ubanikeza ingqiqo ejulile kwimisebenzi yomvuzo ongenanto yerhafu. Ngaloo nto engqondweni kwimisebenzi yaseDaibha kukunikezela ukuba uphile kwimimandla yaseMiddle East.
Amathuba amaKhaya amaNdiya ayaphuma kwi-UAE
Zininzi iindawo apho amaIndiya anokufumana umsebenzi. Inkampani yeDubai City Ukubhala i-blog ngolwazi oluneenkcukacha. Kwaye indlela smart ukusebenzisa indawo yomsebenzi ukunxibelelana nezinye expats. Zimbalwa iindlela ezilungileyo zokuphuma kwamaIndiya njengamaqela emisebenzi kunye nokukwazi ukumema abanye kunye nokongeza iprofayile yakho kwimephu ye-Dubai esebenzisana.
Ngakolunye uhlangothi, kufuneka ukhangele iinkampani eziqeshwe kwi-United Arab Emirates. Enye yezona zilungileyo kwi-UAE yile Umqashi obizwa ngokuba yiCourerjet kwaye Inkampani eyaziwayo eIndiya njengeMonster Gulf. Bafanelekile ukufaka isicelo ngeCV yakho. Abaviwa abangaphezu kwe-100,000 babhalisa khona imihla ngemihla, kufuneka ulandele olo khokelo.
Ngoxa u khangela imisebenzi e Dubai nase-Abu Dhabi. Ngokuqinisekileyo kufuneka ukhangele yethu izikhokelo zabangaphandle belizwe. Kwakhona kwaye rhoqo uqinisekisa ukuba amathuba akho omsebenzi amaNdiya ahamba ngendlela efanelekileyo. Ngenxa yokuba i-Emirates ayikho imarike elula ukungena ukuba ungenaso isikhokelo esifanelekileyo kunye neNkcukacha.
Uzakufumana iingcebiso ezibalulekileyo kubantu baseIndiya malunga izithuba zemisebenzi e-Dubai. Ngokomzekelo, kufuneka ukwazi ulwazi olufihlakeleyo kwi-trade label e-Middle East. Ukongezelela, kufuneka ufumane ulwazi olukhethiweyo lokuhlala kunye indlela yokufumana umsebenzi kwi-Dubai ngokukhawuleza ngokusebenzisa iselula.
Ngolo lwazi luphawu olunye nolwazi olufanelekileyo esikolweni sakho kids. Ngokudibeneyo kunye neengcezu zebhanki zolwazi, kunye nezinto zokuzonwabisa ezisisiseko ezinjengomthambo kunye nokuqina. Ungayichazanga eyokuba ulwazi olunikezwe kwezinye iisayithi aziindaba ezilungileyo. Kuya kufuneka usebenzise kuphela I-website engcono kakhulu ye-Dubai imisebenzi.
Njengoko kunjalo, inkampani yethu yindlela efanelekileyo yokuyisebenzisa iinkonzo zokuqesha kunye nezinye iinkampani aziboneleli iinkonzo ezinjalo. Ukongeza, i-Dubai City Inkampani yenza ii-60 iintsuku kunaliphi na iinkonzo ekufuneni umsebenzi. Ngamanye amagama iimpawu zenkampani yethu ekuncedeni Abafunayo kwi-India ngokubhekiselele ekusebenziseni imisebenzi yethu e-Dubai kumaNdiya enkonzo.
Jonga ngethuba leMisebenzi yamaNdiya e-UAE
Ukufudukela kwi-United Arab Emirates ne-Dubai City Inkampani. Okumangalisa ngakumbi kwaye kwenziwe kakuhle Izikhokelo zokufudukela eMiddle East ungayifumana kwiDubai yethu blog.
Oko kuthetha kwiminyaka edlulileyo, njengomzekeliso, Imarike yomsebenzi wase-United Arab Emirates litshintshiwe ukusuka kwipropati yokuphumayo ibe yindawo ehambelayo kunye neyonke indawo kubantu abaninzi baseNtshona. Ukuyibeka ngenye indlela, i UAE iqulethwe ngeempawu eziyisixhenxe, i-Abu Dhabi, i-Dubai, i-Ajman, i-Fujairah, i-Ras al-Khaimah, i-Sharjah kunye ne-Umm al-Quwain. Amacandelo amabini amashishini angundoqo ase-Abu Dhabi kunye I-Dubai ibonelela ngokuphila ngokugqithiseleyo kwaye amathuba amathuba omsebenzi.
Ngale njongo, I-United Arab Emirates ye-cosmopolitan, ilizwe lokuqala ilizwe elinembali ende yozinzo kwezopolitiko nakwezentlalo umIndiya. Ngethemba lokuba iya kuba mkhulu umsebenzi, ofundileyo, ulwimi oluninzi, kunye nabahlali beenkcubeko ezahlukeneyo abanezakhono ezivela eNdiya, ngeendlela ezinxibelelwano ezintle kummandla nakwamanye amaziko emali. Ubuninzi obunobungqina obunamandla AmaNdiya e Dubai ine-rekhodi eqinisekisiweyo yeminyaka engaphezulu kwe-30 yokunikezela iiprojekthi zezobugcisa ezifana nobuchwephesha, urhwebo, imidlalo, ukuhamba, kunye nokhuseleko lokukhenketho.
Kutheni uhamba e Dubai?
Ngecala elihle, i Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE unayo indlela engekho semthethweni kwezoshishino, kunye neyona rhafu intle kunye nezinye izibonelelo zezemali naphi na emhlabeni. Kwakhona kufuneka ukhunjulwe ukuba iDubai City inamathuba aphezulu emisebenzi. Kwaye eyona ilungele yokufundisa amaNdiya.
Ukubonisa imeko yokuphila ekhuselekileyo yamaNdiya yenza indawo eyaziwayo ukufumana abaphathi bezoshishino kunye neentsapho zabo. Uninzi lwabahlali bamaNdiya ziyakhuthazwa ngokukhawuleza. Ngoko, kukufanelekile ukuthuthela e-Dubai.
Enye ingongoma ephambili: ngaphakathi kwe-UAE kunokwenzeka ukuba ube nokuva iyantlukwano yokwenene phakathi kwabantu odibana nabo abavela eIndiya. Ngaphantsi kwezo meko, yi-11% yabahlali kuphela ezizweni, malunga ne-21% ngama-Arabhu ngokufuduka abafunayo belizwe lonke kwi-Dubai. Ukusuka kwamanye amazwe, i-57% yi-Asiya aseMzantsi kunye ne-11% eseleyo yi-Asiya aseMpuma nakumaNtshona. Ukuxuba ngokwenene kweenkcubeko, iilwimi kunye neenkolelo zikhoyo, ziphuma kumazwe ahlukahlukeneyo azalise ikhefu lobuchule kuwo onke amanqanaba.
Ngenxa yoko, sizama ukukubonisa indlela nimisebenzi yeew e Dubai. Kwicala elibi leengcebiso zethu zokuthengisa, ukukhangela umsebenzi eDubai yinkqubo ende kakhulu. Kodwa into yokuqala ekufuneka siyikhumbule sizakuzama ukukwenza lula oko. Obona bungqina buninzi buzokukunceda ubambe inombolo kanomyayi izithuba zase Dubai. Yimidiya yoluntu e-Dubai.
Umzekelo, amathuba ekhondo lomsebenzi kumaNdiya e-UAE kunye nokukhangela umsebenzi kwi-Gulf. Ngaba liphupha labo? Ukucacisa esona sixhobo silungileyo sibekwe kwikomkhulu le-Emirate WhatsApp Groups kwiGulf kunye ne-United Arab Emirates yonke
Kutheni ungahambi ku-Abu Dhabi?
Kukho amanqaku ambalwa ukuba kutheni kufuneka uhambele kwi-capital esikhundleni se-Abu Dhabi. Umzekelo kwikomkhulu le-Emirates uhlala uhlala ukhula, iikontraki ezintsha zibekwa apho yonke imihla. Umzekelo, kwano-Linkedin kunye noFacebook bavule iofisi apho. Kwelinye icala, I-Abu Dhabi yindawo elungileyo kakhulu kubaphathi beentengiso zeemoto, iinjineli kunye nabasebenzi beoyile kunye negesi. Ke, ngokuthe gabalala, konke kuxhomekeke kumava nakwimeko yakho.
Idolophu yase-Abu Dhabi ilungile kakhulu kubantu abazinzileyo abazinzileyo. Inye eneentsapho kunye namakhaya. Kuba kukho indawo yokubhengeza eninzi kunye nezimvo ezimbalwa. Ngamaxesha onke kuhlala kukho amathuba amatsha e-Abu Dhabi, kodwa kufuneka ukhunjulwe ukuba esi sixeko sinesakhelo kunye nezivumelwano zikarhulumente kwicala lezorhwebo. Inkampani yethu ihlala icebisa izixeko ezikhulu kuba zezo zexesha elizayo ciindawo ezinje njenge-CEO kunye namathuba emisebenzi ye-CFO.
Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE
Iindleko e-Dubai: Ngomntu onempembelelo ofuna msebenzi e Dubai. Iphuzu elidla ngokungaqhelekanga lihamba yedwa. Ewe, kunokwenzeka ukuba uphile kwizinga eliphantsi kakhulu njengobomi beklasi yokusebenza kwi-6500AED. Ukungathethi ngeendleko zokuhamba eziye zahlawulwa ukuba zifike e Dubai. Ngoko ekukhanyeni ubomi obancinci Dubai, kufuneka udibanise iindleko zokuqeshisa kwi-Dubai Area nje ukuhamba ngexesha lokusebenzela emsebenzini. Kanye nepetroli yakho imoto, inshuwalense yemoto, kunye neendleko zokugcina kunye neentlawulo zokuvuselela imoto.
Eyona ndlela enhle kakhulu ukuba uqale umsebenzi ogqithiseleyo kukuthi ukufuna amathuba omsebenzi wezoMoto kwi-UAE. Ngolu hlobo lomsebenzi, uza kuba nethuba lokufumana imoto yehhala kunye nokuqhuba kwindawo yokusebenzela. Ngecala elihle, uya kuhlawula kuphela ipetroli kunye ne-inshurensi.
Ewe, kukho umda omkhulu phakathi kwamaNdiya kunye nezinye iintlanga. Umzekelo, Abasebenzi bakaFilipu bafudukela e-Dubai. Kwaye bahlala kule ndawo emangalisayo. Kodwa abaninzi babo abahlali njengamaNdiya. Bafumana umvuzo ophantsi. Kwaye ininzi yabo ayifumana umsebenzi ofanelekileyo kunye neenkonzo zokukhangela umsebenzi kwi-UAE.
Siza kunceda amaxesha okuphuma kunye namaNqanaba eMisebenzi kumaNdiya e-UAE.
Ngaba iindleko zokuhlala e Dubai?
Iibhili zamakhaya zidibene namanzi, umbane, ifowuni ukuze ukwazi ukuthetha nabahlobo, ngokuqinisekileyo, i-intanethi, ukongeza ukutya, kunye nokutya okongezelelweyo okanye nokutya kumaxesha ngamaxesha. Ukongeza, ungadityaniswa nosapho / abantu abaxhomekeke kuwe abangathanda ukuba nawe eDubai. Ngokuthelekiswa kwinkcitho yakho kufuneka wongeze nge-AED 2000 kumntu ngamnye eDubai. Ngokukhethekileyo kwamanye amazwe, abasebenzi abasebenza ngokuqhelekileyo baba ngamaxabiso aphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, endaweni yokufumana umvuzo omnandi kakhulu e-Dubai, unokuqesha umakazi ukuze imisebenzi yesikhathi esithile e Dubai ukusuka kwezinye zeendawo Nkampani zase Dubai ukuba ungathanda ukugcina ikhaya lakho licocekile.
Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE Yiba ziinketho ezintsha ezimangalisayo zabaphandle. Ke akunandaba nokuba siphi na isikhundla okhangela kuso ngoku. Inkampani yaseDubai City isebenza nzima ukubonelela ngolwazi oluneenkcukacha. Ngapha koko, silawula ibhloko yethu yabazingeli bomsebenzi waseAsia apho abagqatswa abatsha banokufumana ulwazi oluxabisekileyo malunga nenkqubo yokuqeshisa eDubai kunye ne-Abu Dhabi.
umsebenzi Amathuba Ma Indiya kwi-UAE
Ukuchonga imfuneko yemisebenzi e-Dubai ye-Indian!
Nangona oku kuyinyaniso yethu nkampani e Dubai Khomba iqhinga eliqashisayo lokuqeshisa kwi-United Arab Emirates kumfazi. Ngokufanayo, sizama ukufumana isiseko senani lezithuba kwiSixeko sase-Dubai. Kwaye sisebenza rhoqo ngemisebenzi yokufundisa e-Dubai kunye IT imisebenzi e Dubai. Ngoko ke ngoko sifuna ukuba ufumane amathuba emisebenzi e-Dubai kufuneka sinyamekele iingxelo zabaqashi ozifunayo.
Kwelinye icala, Inkampani yaseDubai City ihlala izama ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokubekwa kwi amathuba emisebenzi e-Dubai. Ngoko sizama ukuyibeka ngokuhlukileyo Ukuqashwa e Dubai kwaye ngokusoloko begcina abaphathi be-Indiya bavuya kunye nemisebenzi emitsha yeemirates.
Ukufikelela kwamathuba emisebenzi ngamagosa okuqesha
Enye ingongoma ephambili IiNkxaso zamaZwe aMazwe ngamazwe okuzithengisa Bahlale begcina imfuno ebelwana ngayo nabafunayo kwi-Dubai. Kwelinye icala, Dubai City Inkampani endaweni yokufikelela ekuboneleleni ngemisebenzi elula. Ukusoloko udibanisa abazingeli bemisebenzi ukuza kuthi ga ngoku kunye neeseti ezifanelekileyo zabantu abanjengee-Headhunters, Iiarhente zokuqesha, kunye nomphathi wokuqesha abasebenzi.
Ngapha koko, bunzima kakhulu nawuphi na umcimbi sifikelela kubo ngemithombo emininzi nkqu sisuka ePakistan. Ke kwindawo yokuqala, kuya kufuneka ufikelele egqibelele abameli bokuqesha e Dubai, ukwenza oko, kunjalo, Uphando yenzelwe Umsebenzi eDubai uze uzame fumana abaqashi abaphezulu kwi-Dubai nase-Abu Dhabi.
Njengokuba kunjalo, amanxusa angenakuphikwa abaqeshwe njalo baya kuba kwi-Google yeMisebenzi. Ukongezelela unokwenza uphando kumazwe ngamazwe arhente zokuqesha e-Mumbai, okanye i-headhunters yendawo e-Hyderabad efana ne-arhente ye-UAE inokukunceda imisebenzi yase-intanethi e-Dubai. Ii-arhente zengqesho zase Dubai zijolise ekufumaneni abantu abanetalente e-India kunye nabaviwa abanolwazi kwaye bawabeka umzekelo umququzeleli imisebenzi e Dubai okanye nayiphi na enye imisebenzi emirates.
Ngokukhawuleza okanye kamva njengomfunyi womsebenzi e-UAE. Ngokuqinisekileyo iya kuhamba ngokukhawuleza ukulwa msebenzi e Emirates ngeefayile ezahlukeneyo. Umzekelo, imisebenzi yehotele eDubai yindlela elungileyo. Okwangoku, kufuneka ulwele imisebenzi yezokhuseleko eDubai kwabelwane ngenkampani yethu kwi-LinkedIn. Kwaye ekuhambeni kwexesha imisebenzi yomqhubi e Dubai kuba kulula kakhulu ukufumana. Bese ukhenkcela abaviwa abaza kubakho kwaye unxibelelwano lwabagadi-ndlebe. Umsebenzi wase-Dubayi ukuqesha abaphathi eUnited Arab Emirates bahlala bejonge abantu abasuka eIndiya. Ngokucacileyo ukwenza isiphelo kwaye kulula ukufumana eDubai kwaye uhlala Ilungele ukusebenza nzima kwimivuzo ekhethekileyo.
Ok, ukuqala, uvela e-Indiya kwaye ezininzi zeemveliso ezivela e-Asia zihlelwe. Ngenxa yoko i-oriented-oriented in short short intelligence, of course talent, kunye nokuthelekiswa kwabanye abaqhelanisiweyo. Sifeza okuninzi ukufakwa evela eIndiya e Dubai. Njengomcimbi weqiniso esiqinisekileyo sihlala siqinisekile ukuba siphumela umphumo obalaseleyo wokulungelelaniswa kwabaqeshi bethu baseAsia. Ingathethi ukuba kubaluleke kakhulu ukuba sivale kwinani elikhethiweyo lezithuba zasezidolophini zase-Dubai kwi-60 engenakucingwa ukuya kwixesha lexesha le-90. Enyanisweni, inkampani yethu e-UAE ihlala izama kwindawo ye-India abafuna umsebenzi kunye neentswelo kuphela kwimisebenzi yakutshanje e Dubai.
Kutheni Imisebenzi eDaibhi yaseNdiya ithandwa kangaka?
Qala Umsebenzi kwaye ufumane impumelelo enkulu e-UAE
IDubai yeyabakhangela imisebenzi bamanye amazwe njengeyona ndawo ichumileyo yokuziphindezela kumakhondo omsebenzi kwisishwankathelo semisebenzi kwi-UAE. Ngesi sizathu inyanga nenyanga abaphathi abaninzi evela eIndiya afikile kwimisebenzi yokuthengisa e-Dubai. Kungenxa yokuba kubalulekile ukuqonda ukuba izinto ezenziwe ngemali zingakunceda wenze imali kwi-United Arab Emirates.
Ngaphantsi kwezo meko, i-Dubai iba enye yezona zixeko ezibiza kakhulu kwaye zizityebi kwihlabathi. Imisebenzi yokuthetha ngokubanzi e Dubai nge Indian apho abaninzi baseAsia bahlala ubomi bokunethezeka. Njengoko kuphawulwe xa u tyelele iUAE Kwakhona lizwe elizele abantu abazizityebi.
Ngethuba elifanayo ukuba uyazi apho uza kutsho khona unokwenzelwa lula imisebenzi eDaibha ukuze uhlaziye. Kwaye ekugqibeleni, uya kudibanisa nenani elikhulu lobuntu obutyebi abanokukunceda Ukukhangela umsebenzi wase Dubai.
Kungekudala okanye emva koko xa uza kuba ngumviwa ogqibeleni ufumana umsebenzi kwindawo leyo uya kuqala ukuhlala ubomi bokunethezeka. Ngaphandle nje kokuba idolophu yase-Dubai ibambe iqela elikhulu labakhandi. Ngexesha apho amaxesha aphumayo afaka amahhotela amnandi ithuba lomsebenzi. Ngamaxesha athile indawo yokuhlala yokuhlala kunye izitolo zokuthengisa njenge-career e-UAE.
Emva koko umsebenzi kwisixeko kwaye uya kwenzeka. Kwimvelaphi, le ndawo emangalisayo ikwavunyelwa njengenye yeendawo zokuthenga ezithengileyo zomfazi wakho kwihlabathi. Uya kukwazi ukuba xa ufika apho kwaye uqala ukwenza imali. Ngoko, phakathi kwendawo yokukhangela msebenzi e Abu Dhabi kunye ne-Dubai kufuneka sibe neliso ebomini kunye umsebenzi okhoyo eMiddle East.
Imisebenzi e-UAE yamaNdiya kwaye akukho nabasebenzi abanamava?
Wonke umntu okhangela umsebenzi kwindawo yokuqala ucinga ngedolophu yase Dubai. Njengokuba kunjalo, kukho no-Abu Dhabi apho ufuna ukukhangela umsebenzi. Nonke Indian in UAE Ukunyaniseka ngokunyanisekileyo kwenguqu yomsebenzi. Ngoko ngexesha elifanayo Musa ukuza ukuzingela umsebenzi e-United Arab Emirates ngokutyelela iisa visa. Enyanisweni, amaNdiya amaninzi athetha ukuba baya kufumana umsebenzi kwi-visa yokutyelela. I-7th Emirates ikhangele zonke iindidi zabasebenzi, kungabikho nabasebenzi abanamava ukuya kubaphathi.
Eyona ndlela elula yokufumana umsebenzi eDubai kukuqala kwinqanaba eliphantsi. Kuba imisebenzi yolawulo Ukunikezelwa akubhengezwanga okungako kwi-UAE. Uninzi lwezinto ezaziwayo ezaziwayo azibhengezwa ukuba zinikezela ngemisebenzi. Ukunikezelwa kwaye kuyakhawuleza Indlela ekungekho bantu banamava ngayo kukufumana imisebenzi ekumgangatho ophantsi.
Ngenjongo yokuphanda umsebenzi DUBAI City: AmaNdiya afike eUAE. Ngokukodwa ufuna imisebenzi yehotele eMbindi Mpuma, kungekuphela kweEmirates. Ungalokothi ufikelele kutyelelo lweevenas ngaphezu kwazo zonke. Ngaloo nto engqondweni, bonke abafunayo umsebenzi we-Indian kufuneka baqinisekise ukunikezelwa kwabo kwi-visa e-Dubai. Isiseko ngaloo abantu baseNdiya beza ngethemba lokuba iimvume zee-visa ziya kunikwa yinkampani yokuqesha. Into enye, yenza okulungileyo kwaye ngaphambi kokufika kweli lizwe zama ukufumana i-visa yokusebenza kwi-UAE. Ukuyibeka ngenye indlela, nokuba i-consulate yase-India e-Emirates ithe ukuba kukho inani elikhulayo lokumba Umqambi omtsha wezemisebenzi kunye nezicwangciso zokukhwabanisa eziqhelekileyo.
Umsebenzi e-Dubai kunye neVisa ye-Indian
Ngokomzekelo, ukucebisa nge-2018 Gov kulandela inamba ephezulu ye-visa yokukhwabanisa. Kwaye ngokuqhelekileyo ukuthetha, ukutyelela nokutyelela amaNdiya abe yixhoba ekuhlaleni kokugqibela kokubi ukuphanda. Kwimeko apho, iAsia abantu abafuna umsebenzi kufuneka bathethe ne-consulate. Ngenxa yokuba zininzi ezinye BaseIndiya abaye baxhamla ngamazwe ngama-agent agqirha okanye abaqeshi rhoqo. Ekugqibeleni abasebenzi base-Asia abafumani umsebenzi okanye umvuzo awuzange ukhokhwe kubo.
Kuze kube ngoku, i-UAE inenkathazo enkulu Visa yaseNdiya. Ukususela ngexesha elide abafunayo abavela eMumbai bathembisa imisebenzi ethile yokuthengisa e-Abu Dhabi kwaye ngokungazelelwe bangenanto yokubuyisela. Kodwa kwimvelaphi ekufikeni ukuba umcebisi wezemisebenzi wayexelelwe ukuba asebenze njengabasebenzi bomyinge osisigxina kwisakhiwo sokwakha kwaye wongezelela ukuba uza kwenza imali eNdiya. Ungakwazi kwakhona ukujoyina amaqela ethu emisebenzi BasePakistan base Dubai nje ukuba ube nombono ocacileyo. Ziziphi ezinye iintlanga ezilawula amathuba emisebenzi. Njalo indlela yokufumana umsebenzi eSaudi Arabia kunye nezinye iindaba kunye neengcebiso zeengcebiso.
Kuze kube ngethuba langoku kwisiqingatha sokuqala se-2017, i-consulate ye-India ithole ingxelo evela kwi-UAE. Ukuthi ekuhlalutweni kokugqibela inani lezikhalazo zabasebenzi be-540 ezivela kubantu base-Indiya ziye zazisombulula kwi-UAE kwaye zafumana umsebenzi e-Abu Dhabi okanye kwiDolophu yaseDaibha. Ngalinye icala, ingxelo yathi I-Asia expat abasebenzi baseUAE bayonwabile xa behlawuliwe kakuhle umsebenzi kwibhanki kwi-Dubai okanye eIndiya.
Imisebenzi ehlawulela phambili e-Dubai City?
Enye ingongoma ephambili esinokuyibonakalisa ngayo nawe Imisebenzi ehlawulela phambili e-Dubai City kunye Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE. Olu hlobo lomsebenzi lungaphezu kokuba lidume !. I-CFO kunye ne-CEO yamathuba omsebenzi asavulekele abagxothiweyo baseAsia. Ke, ukuba unamava amahle kunye nemfundo elungileyo nenqanaba eliphakamileyo.
Inkampani yeSixeko sase Dubai Ukuhlaziywa kwemivuzo e-Dubai nase-Abi Dhabi kufinyelela ngaphezu kwee-job title ze-300. Kule meko, amashishini angundoqo ase-UAE awona mhle kakhulu wokufumana umsebenzi. Kwaye ngokuqhelekileyo uthetha, kufuneka ufumane ukuba yiyiphi inqanaba lokuhlawula umvuzo kwaye uzama ukuba entsha Umfundi ophuphayo eMzantsi Afrika. Ngaphantsi kwezo meko, kukho inkalo eninzi yokuqwalasela. Xa ukhetha ukuqala umsebenzi omtsha wephupha e-UAE.
Ingqwalaselo enkulu ekufuneka uyenzile Gxila apho kwimeko yemivuzo ephantsi umsebenzi oshiyekileyo wobomi ukuba ndingafuna ithuba elingaphezulu. Kwicala elingalunganga sisiseko somsebenzi ohlengahlengahlengiswa okanye olawulwa ndim? Ngaba iyabonelela ngolindelo lomsebenzi olungileyo kunye nokufumana umvuzo ongcono kwirhafu? Okanye iya kundenza ukuba ndithole imali eninzi? Ke jonga Amathuba omsebenzi kumaNdiya e-UAE naseGulf kwaye yintoni eyona ndlela ingcono yokukhetha.
Amathuba angqesho aphezulu kwiDaibhi yaseNdiya
Eyona nto ibhetele kwiCandelo eliPhezulu leGosa eliLawulayo e Dubai
Umyinge wenyanga ukuhlawula ngokukhanya kwempesheni emangalisayo: Dh120,000
Kanye kunye nomyinge womvuzo: Dh65,000 ukuya kwiDh145,000
Njengokuba kunjalo, iingcali zokuthengisa zikulungele ukusebenza
Ukungathethi nto yokuhlawula iinyanga eziquka umhlalaphantsi: iDh85,000
Uthelekiso Uhla lwemivuzo: Dh60,000 ukuya kwiDh100,000
Ukuqhathaniswa kweengxelo eziphezulu kunye nabaqeqeshi bezemali kwi-UAE
Ngokudibana neminye imisebenzi ebalaseleyo kwaye ngokufanayo nakweminye imirhumo ehlawula inyanga nenyanga kubandakanya ipenshini: Dh75,000
Uthelekiso Uhla lwemivuzo: Dh55,000 ukuya kwiDh90,000
Ukongeza ukongeza iibhanki eziphezulu kunye nomvuzo wokugqibela wenyanga kuquka nomhlalaphantsi: Dh70,000
A ngelokhu engqondweni bafumana uluhlu lwemivuzo: Dh53,750 ukuya kwi-Dh99,500
Ukudibene nokuhlawulwa kwebhonasi emangalisayo Abaqeqeshi base Dubai
Ngaphezu koko, umsebenzi onzima kakhulu ukuba ungene e-UAE njenge-Indiya kunye nomyinge wenyanga umvuzo kunye nomhlalaphantsi: Dh67,000
Uthelekiso Uhla lwemivuzo: Dh60,000 ukuya kwiDh116,000
Owona msebenzi mhle wokuqalisa, kodwa ukunika amathuba amaninzi
Ingakhankanya oogqirha bezobugcisa kwi-United Arab Emirates
Umyinge wokuhlawula umvuzo wenyanga uquka ipensheni: Dh70,460
Kunye nabanye Imisebenzi yaseGulf ephezulu Ibanga lemivuzo: I-Dh70,000 ukuya kwi-Dh220,000
Umvuzo ochaphazelekayo Iingcali ze-neurologists, ingakhankanyi iintloko zezithintelo kunye nomzimba wesifo somzimba, ngokulinganayo kunye neengqondo zengqondo zabantwana / iingqondo zeengqondo kunye nabagulane bama-vascular.
Ngaba ulungele ukusuka eNdiya ukuya e-Dubai?
Kukho ngaphezulu kwe-600,000 abafakizicelo abatsha kwiziko ledatha. Yonke imihla imisebenzi emitsha eDubai I-Indian expats iyahamba iye kwiwebhusayithi yethu. Inkampani yethu inabalandeli abaninzi abonwabileyo abatsha kunye nabafuna imisebenzi emitsha abangahlali nje eIndiya. Kuba sikholelwa ukuba wonke umntu kufuneka abe ithuba lokungqinisisa eyona ntengiso ingenaxhamla kwihlabathi.
Sakhele uhlobo oluhlukeneyo lokuqasha inkampani e Dubai. Kuze kube ngoku, siye sinceda ngaphezu kweendwendwe ze-1,400,000 ezivela eNdiya. Njengoko kuphawulwe ngamasevisi esivulekileyo xa kukulungelelanisa kakhulu, rhoqo imihla ye-7 ngeveki. Ekuqhubekeni, Unokungena kwinkampani yethu yokuqesha ngaphandle kokuqeshwa.
Ngelo xesha, unako ukuhamba kunye i-akhawunti yokusebenzela yokufuna umsebenzi. Ngokubanzi ukuthetha malunga nomsebenzi okhangela umIndiya sisemagqabini kwinto esiyenzayo. Ngokuqinisekileyo, kuhlalutyo lokugqibela, Silindele isigxina sakho kwi-United Arab Emirates. Ngokuqinisekileyo unokufumana ulwazi oluxabisekileyo oluvela kwamanye amalungu ethu. Ungaya kwicandelo laMalungu kwaye uqhagamshele kunye namawaka abagxothiweyo.
Sebenza kwisikhundla se-CEO njenge-expat yaseIndiya
Ngaba uyazi ukuba zininzi CEO i-CEO sebenza e Emirates? Ngokomzekelo, imisebenzi ye-Google e-Dubai ngoku ikhona kubafunayo belizwe elizwe. Ngoko, umzekelo, amathuba amasha omsebenzi kumaNdiya ase-UAE avulekileyo. Ama-expats aseIndiya awamkelwa kakhulu kwi-Emirates. Yaye imibutho emikhulu iqesha yonke imihla abantu abatsha baseIndiya.
Omnye umzekelo wezithuba eziphezulu zezikhundla zabafudumi base-Asia yi-WhatsApp. Kule nkampani ethile, abaphathi abatsha base-Asia basebenzisana namaqondo aphakamileyo aphezulu, ngakumbi kwiSebe le-IT. Kubaluleke kakhulu ukuqonda oko yethu nkampani iqesha kwi-WhatsApp. Ke ukuba unolwazi olululo ngamava unokufumana umsebenzi kwiNkampani yeDubai City. Kwicala elibi, asiboneleli a CEO okanye isikhundla solawulo oluphezulu kuba sele sithathe abaphathi abaphezulu kwishishini.
Amathuba oKhathalelo lwamaNdiya e-UAE - Zezakho e-Dubai.
Ngoku ixesha lokuphetha lifanelekile ukukhangela umsebenzi ku-Abu Dhabi okanye kwiDaibhi ?.
Ngaba kuyafaneleka ukuba ufumane umsebenzi e-Dubai njengamaNdiya?
Ngokuqinisekileyo i-Dubai, le ntengiso ephambili kwiTV. Kukho ngoku a uninzi lweeprojekthi ezintsha ezizayo kwingingqi yeGulf. Ngaphezu koko, ISaudi Arabia ngoku yenze uthintelo oluthile kumaIndiya asebenzela iiNkampani zaseSaudi. I-Qatar kwelinye icala, ngaphandle kokunika nantoni na engaphezulu kweekhontrakthi zeminyaka ye-2-3. Ke, njengoko ukhetho smart inkampani yethu ucebisa Emirates. Kukho ngaphezulu kwe-30,000 imisebenzi emitsha eyongezwe kwiindawo zokuqesha ezininzi kuphela kubasebenzi abatsha kwikomkhulu le-Emirates.
Olunye ulwazi olunokukuqinisekisa ukuba ufumane umsebenzi eDubai linani lamaIndiya e-UAE. Kukho ngaphezu kwesigidi ezimbalwa sababhalise abagxothiweyo baseIndiya eDubai nase-Abu Dhabi. Oku kuya kukunika isiqinisekiso esincinci ngesigqibo sakho. Kuba ukuba izigidi zabantu zikwazile ukufumana ubomi obumnandi kwi-UAE. Kufuneka uzibone njengomntu oxabisekileyo kumsebenzi olungileyo.
I-Dubai City Inkampani unako ukuqiniseka ukuba xa usebenzisa isicelo senethiwekhi yethu yentlalo. Uya kuthiwa ubekwe ngamathuba kunye namathuba omsebenzi kumaNdiya ase-UAE ahlale efumaneka kwaye alawulwa yiqela lethu le-HR.
Isiphelo kubo bonke amaNdiya abafuna umsebenzi e-Dubai
Siyicinga ukuba kunye neengcezu zolwazi unolwazi olunzulu malunga nalo umsebenzi wokuthengisa eMirates. Ngoko, njengokuba kunjalo, uvela e-Indiya kwaye ufuna umsebenzi e-Dubai kubalulekile ukuqonda ukuba ukufikelela kumqeshi akuyona into elula ukuyenza.
Kwimeko elungileyo, silapha ukukunceda, silawula WhatsApp Groups for jobs seekers. Uxhumano lwe-Linkedin kunye neenkqubo zokulawula abaqeshi, ukulayishwa okuyingqayizivele kakhulu kuya kwi-option ye-Dubai. Ngaloo ngqondweni ekufumaneni umsebenzi ovela eNdiya ukuya kwi-United Arab Emirates kufuneka kube lula.
Ngokusekelwe kwi-Experiential Company ye-Dubai City. Njengomzekeliso wemisebenzi kunye yophando lwemisebenzi eMiddle East, si ukubandakanya imivuzo e-Dubai iingcebiso, ukulinganisa, kunye nezinye iingcebiso zokufumana umsebenzi e-UAE ukuba uvela e-Indiya.
Ukukubeka ngenye indlela, sizama ukubeka yonke i-expat evela e-India kwaye senze ukuba babe ngabasebenzi abalungileyo kwi-United Arab Emirates. Ngokuqhelekileyo uthetha, rhoqo kufuna imisebenzi kunye ne-MBA kwaye ulondoloze lwakho uphando kwiincwadi okanye kwi-laptop xa umqeshi wakho wexesha elizayo uzama ukubiza nomsebenzi wokunikezela.
Sinethemba lokubona umntu omtsha waseIndiya ehamba kudumo lwendlela ebalaseleyo kunye nephupha lesiArabhu. Sinayo kuphela ndiyathemba ukuba iya kuba nguwe!. Ndikunqwenelela amathamsanqa kwaye ndiyathemba ukuba uza kwenza nesicelo sakho Inkampani yase Dubai.
Izikhokelo ze-Multilanguage for Expats
Oktobha 30, 2019
Indlela yokurenta imoto phesheya (nangaphezulu). Isikhokelo seeNgxelo zeeMali.
Ngawaphi amaxwebhu e-Kuwait? I-Visa ukuya eKuwait Uxwebhu oluvumela abemi basePoland ukuba bafudukele kwimimandla ye-Kuwait yivisa, enokufunyanwa kwi-ofisi yase-Kuwait e-Warsaw. Enye indlela yokufumana uxwebhu (okwexesha elingadlulanga kwiinyanga ze-3) kukuthenga kwisikhululo seenqwelomoya eKuwait, ngaphandle kwemigaqo eyongezelelweyo. Abaphethe i-visa yabakhenkethi ye-Kuwait banokuba ngababambisi bencwadana yokundwendwela esebenzayo ubuncinci iinyanga ze-6 ukusukela kumhla wokuhamba. Umrhumo we-visa yi-3 SD, ixabiso loshintsho olujikelezayo kwi-35-40 PLN. Kuwait yeyiphi imali oza kuyithatha? I-NZ Umbono ngaphesheya kwe-Nxweme ye-Nxweme yolwandle, ecwazimileyo kwilanga elijikeleze ilanga, ujikelezwe ngamanzi e-Persian Gulf, uhonjiswe ngeenqanawa kunye neenqanawa zokuhamba ngeenqanawa ubuyela kwizibuko, ngokuqinisekileyo ziya kukhunjulwa ixesha elide ngabo baya kuba ne ithuba lokuncoma le mbono ngamehlo abo. Ukongeza, uhambo oluya e-Kuwait lithuba elihle lokubona iZiko lezeNzululwazi, elona ndawo iphakamileyo emanzini e-Middle East, apho iintlobo zezidalwa zaselwandle ezihlala kwiArabia Gulf, kubandakanya ookrebe, zagxininiswa. Ukuze ubone zonke ezi zinto zinomdla ngamehlo akho, ngaphambi kokuba uhambe, kuya kufuneka ukhumbule impendulo kumbuzo "Yeyiphi imali eyiKuwait?" - imali ye-Kuwais iya kubonelela abahambi uhambo olunoxolo kunye olukhuselekileyo.
Yimalini ekufuneka ndiyise eKuwait?